निर्मला बलात्कार प्रकरणः अनुसन्धानको सुरुवाती अवस्थामै त्रुटि ! - Everest Dainik - News from Nepal
निर्मला बलात्कार प्रकरणः अनुसन्धानको सुरुवाती अवस्थामै त्रुटि !
कञ्चनपुर, भदौ २२ । १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धानको सुरुवाती अवस्थामै त्रुटि गरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जनाएको छ । प्रहरी अनुसन्धान प्रक्रियासंगत नभएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
आयोग टोलीले पनि घटनाको स्थलगत अध्ययनसहित सरोकारवालासँग छलफल गरेको हो । घटना शीघ्र अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा सुरुवाती अवस्थादेखि नै त्रुटि गरेको आयोगकी आयुक्त एवं प्रवक्ता मोहना अन्सारीले बताइन् । ‘प्रमाण संकलनमा प्रहरीले कमजोरी गरेको छ । घटनास्थललगायत क्षेत्रमा प्रमाण जुटाउने कार्यमा समेत त्रुटि देखिएको छ,’ आयुक्त अन्सारीले भनिन् ।
घटनास्थलको अध्ययन, पीडित परिवार, पक्राउ परेका व्यक्ति र उनीहरूको परिवारका सदस्यसँग आयोगको टोलीले भेटघाट गरेको छ । त्यसक्रममा प्रहरीले प्रक्रिया मिचेर काम गरेको पाइएको बताउँदै प्रवक्ता अन्सारीले निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या घटनालाई आयोगले गम्भीर रूपमा लिएको जनाइन् ।
महेन्द्रनगरमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता अन्सारीले अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले केही नागरिकलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको उल्लेख गर्दै आपत्तिसमेत जनाइन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
प्रदेश ७ मा महिलामाथिका हिंसाका घटना दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको आयोगले जनाएको छ । प्रदेश कार्यालयको तथ्यांकअनुसार एक वर्षमा ९७ बलात्कार घटना भएका छन् । त्यस्तै, दुई सय २८ आत्महत्या र २६ मानव बेखबिखनका घटना भएको आयोगको तथ्यांक छ । जसमा महिला हिंसासम्बन्धी २० वटा उजुरी अनुसन्धानका क्रममै रहेको जनाएको छ ।
ट्याग्स: kanchanpur, Nimala Pant, Rape